Nhungamiro Inobva Semalt Yokudzivisa CryptoLocker Ransomware
Mikana ye CryptoLocker yepakombiyuta zvirwere yakave yechokwadi kumushandi wekombiyuta. Izvi zvinotsanangura kupararira kwemibvunzo yeIndaneti kunyanya kubva kuvashandisi veMicrosoft Windows maererano nekuchengetedzwa nekugadziriswa kubva kune zvimwe zvirwere.
Ivan Konovalov, nyanzvi kubva kune Semalt Dhidhidhi Dhidhidhi, inozarura pano mamwe maitiro anobatsira ekudzivirira kudzikinura.
Kutanga, CryptoLocker yava izwi rechiito chekutsvaga kweprojekti yakaipa iyo inonyora yose mafaira evashandisi pane kombiyuta kusvikira mari yekubhadharwa inobhadharwa - importance of food grain storage. Izvo zvino software yakapararira yakaita zviuru zvemakambani nevanhu vari munyika yose kuti vafukidze mamiriyoni emadhora mumari yekudzikinura. Nyanzvi dzezvokuchengetedza dzinofanirwa kuti zvidzikinuri zvinopararira kuburikidza nebooby zvakabatanidzwa zvinyorwa pa spam kana emaimiriki akakodzera. Inopindawo kuburikidza nemamwe mawebsite anobvongodzwa achibatsirwa nekushandiswa kwemajeri ekupedzisira pane web browser. Kunyange zvazvo kubvisa urongwa uhwu hwekuregererwa hungave huri hwakaoma, hunobudirira uye hunogadzirisa zvachose mafaira ako ega pakombiyuta inoita kuti zvisingakwanisi kuwanika kusvikira rudzikinuro rubhadharwa nenzira yeBitcoin currency.
Kunyange zvazvo rudzikinuro rwunoita sehutoriyanzvi hutsva, huwandu hwayo huve hwakave huripo kwemakore kunyange zvazvo huri pasi nepakati uye kushandiswa. Mutsika, vashandi vepakombiyuta vave vachifanira kuchengetedza mafaira avo kuti vadzivirire pakurasikirwa kwepa data kubva kune zvinotyisa software uye mavairasi..Zvisinei, CryptoLocker inoshanda nehutsinye hwakadaro iyo inobatanidza mabheji ekuchengetedza uye makombiyuta emakombiyuta emunharaunda kana zvose zvakabatana. Pamusoro pekufa, iyo malware inotora maawa kunyange mumazuva ekupinda mukati maitiro uye kuvhara mafaira, uye kombiyuta yehurumende haigone kuratidza kunze kwezviratidzo zvekurwisa kuswedera. Kamwe kuvharidzira kwakakwana, iyo Trojan ine pop-up dial bhokisi inosanganisira mharidzo pfupi uye timer inoda kombiyuta system mwini uye ikozvino inotambudzirwa kubhadhara rudzikinuro mukati mezera rinotsanangurwa nguva.
Nenzira yakanaka, isu iye zvino tine CryptoLocker Prevention Kits iyo isingashandisi kushandiswa kwevatungamiri vehurumende uye vashandi vomumba vese. Chigadzirwa chacho chinosanganisira kugadzirisa kwakakwana uye kwakakwana kwemirairo nemirairo yekudzivirira zvirwere zvemarware munzvimbo dzose. Zvimwewo, John Shaw weFoolish IT akanyorawo CryptoPrevent - chinhu chinoshandiswa chekushandisa chigadzirirwa kushandisa CryptoLocker Prevention Kit pamusana wevashandi vemusha. Icho chinouya neshanduro inoshandiswa uye inosungirirwa kunenge chero mhando yekombiyuta yemusha. Zvisinei, chigadzirwa ichi chave chichirambidzwa se software yekushungurudza ne anti virus maikiti akadai seMcAfee SiteAdvisor.
Gore rimwe nerimwe rine sirivha yokugadzira. Pakati pezvinhu zvose izvi, kusachengetwa kwemakore gore rakawana bhizimusi kubva pakabuda CryptoLocker. Vazhinji vashandi vemakambani zvino vari kuita mitambo yekuchengetedza demo yegore sezvo yavo yekupedzisira yekuchengetedza data inofanirwa kuti CryptoLocker infestation inoshandise masangano avo. Vanoshungurudzwa nerudzikinuro urwu vanogona kuratidza hukuru hwekuparadzwa kunouyisa kuzhinji, nekunyora zvinhu zvose mumakumbo ayo. Nyanzvi dzekombiyuta nevashandisi zvakafanana vanokanganiswa nehuwandu hwehutaneti kuburikidza nemubvunzo wekuti rudzikinuro runotevera ruchava sei.
Mukupedzisa, makombiyuta masangano nevatadzi vese vanogara mumusha vanofanira kutora matanho ose anokwanisa kuchengetedza makombiyuta kubva pakudzikinura. Vanoramba vachichinja saka vachiita kuti mumwe adzidze maitiro avanoita uye anoenderana nazvo. Gadzirisa moto wako wekudzidzira moto uye browser uye uone maimeri ako usati waverenga.